बाइक-स्कूटीको माइलेज बढाउन यि ५ आइडिया ब्यबहारमा ल्याउनहोस् । जसलाई पैसा तिर्नु पर्दैन – Idea Khabar
आइडिया खबर२०७८ जेष्ठ १४, शुक्रबार ०६:२३
प्राय: मानिसहरू गुनासो गर्छन् कि उनीहरूको बाइक र स्कूटीले माइलेज दिएन धेरै पटक तिनीहरू सर्भिस सेन्टरमा गएर यो समस्याको समाधानको बारेमा सोध्छन् । तर समस्या हट्दैन। वास्तवमा पेट्रोल झन् झन् महँगो हुँदै गइरहेको छ र मान्छेको समस्या बढ्दै छ। यस्तो अवस्थामा तपाईले आफ्नो बाईकको माइलेज बढाउ यि आइडियालाई फलो गर्नुहोस् ।
१. गतिको ख्याल राख्नुहोस्: जब तपाईं आफ्नो बाइकको साथ यात्रा गर्नुहुन्छ, सबैभन्दा पहिले गती दिमागमा राख्नुहोस्। बाइकलाई समान गतिमा चलाउन प्रयास गर्नुहोस्। प्राय: मानिसहरूले पूर्ण गतिमा वा सबै ढिलो गतिमा बाइक चलाउन शुरू गर्दछन्। लगातार गियर परिवर्तनले तेलको खपत बढाउँदछ। तसर्थ, तपाईं बाइकको माइलेजलाई गतिमा दिमागमा राखी चलाउदा माइलेज बढ्छ ।
२. ओभर लोड: तपाईले टु विलरमा अधिक वजन दिनुहुन्छ भने, इन्जिनमा धेरै दवाव बढ्छ। इञ्जिनमा बढ्दो चापको कारण पेट्रोलको लागत बढ्नेछ। त्यसकारण जहिले पनि दुई जना व्यक्ति यात्रा गर्ने बाएक बा स्कुटिमा तिनजना बसेर यात्रा गर्न हँदैन । यो ट्राफिक नियमको बिरूद्ध हो र तिनजाना यात्रा गर्दा तपाइले सोचे भन्दा धेरै तेल खान्छ ।
३. टायरमा हावा जाँच्नुहोस्: कहिलेकाँ टायरमा कम हावाको कारण बाइकको माइलेजमा कमी आउँछ। खास गरी गर्मीमा यस्तो समस्या आउँछ। तसर्थ, कृपया हप्तामा एक पटक टायरको एयर जाँच गर्नुहोस्। यस बाहेक, नाइट्रोजन ग्यास भरिने बाइकको टायरमा बिशेष ख्याल गर्नु पर्दछ। किनभने नाइट्रोजन ग्यासले टायरलाई तताउन दिँदैन। र कडा सूर्यको किरणबाट बाइकलाई सुरक्षित राख्नुहोस् ।
४. इकोनोमी मोडको ख्याल राख्नुहोस्: इकोनोमि मोड सबै बाइकको स्पीडोमीटरमा उपलब्ध छ। यो माइलेज सुधार गर्न प्रयोग गरिएको छ। त्यसोभए घरबाट बाइक लिने क्रममा मोटरसाइकलमा इकोनॉमी मोड मार्कलाई ध्यानमा राखी यात्रा गर्नुहोस्। यस मोडमा बाइक चलाए यसले अधिक माइलेज दिन्छ।
५. एयर फिल्टर नियमित रूपमा सफा गर्नुहोस्: बाइकको इञ्जिनको हावा एयर फिल्टरबाट जान्छ। फिल्टर फोहर छ भने ईन्जिनले पर्याप्त हावा पाउँदैन। यसले माइकको साथसाथै बाइकको क्षमतामा पनि असर गर्छ। तसर्थ, यो महत्वपूर्ण छ बाइकको एयर फिल्टरहरूलाई समय समयमा सफा राख्नुहोस्। धेरै पटक बाइकको स्पार्क प्लग फोहोर हुन्छ, जसको कारण बाइकले धुवाँ दिन थाल्छ। यसले बाइकको माइलेजलाई असर गर्दछ।
२०७६ आश्विन २०, सोमबार ०५:५६